Guddiga Waxqabadka Dhallinyarada (YAC) - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Guddiga Waxqabadka Dhallinyarada (YAC)
Guddiga Waxqabadka Dhallinyarada wuxuu u adeegaa sida guddiga kormeerka dhalinyarada ay hogaamiso ee Mashruuca Banaanbaxa hoy la'aanta ee Tucson / Pima. Guddigu wuxuu ka kooban yahay dhalinyaro iyo dhalinyaro waaweyn oo khibrad nololeed u leh hoy la’aan iyo / ama deganaansho la’aan guri waxayna siisaa khibrad iyo hagis Guddiga CoC maadaama ay la xiriirto istiraatiijiyado looga hortago loona soo afjaro hoy la’aanta dhalinyarada.
Kulamada guddiga waa uxiran yihiin dadweynaha. Hay'adaha ama dadka waayeelka ah ee xulafada la ah ee doonaya inay ka qaybgalaan ama u soo bandhigaan Guddiga Waxqabadka Dhallinyarada waa inay u soo diraan codsigooda tpch@tucsonaz.gov. Codsiyada waxaa loo gudbin doonaa xubinimada guddiga si loo ansixiyo.
Bixinta hagitaan iyo talooyin siyaasadeed oo ku saabsan hirgelinta, maamulka iyo kormeerka adeegyada saameynaya dhalinyarada la soo deristay hoy la'aanta ama qatar ugu jirta guri la'aan.
Tilmaamida qorshaynta socda ee adeegyada dhalinyarada hoylaawayaasha ah iyo kormeerida Qorshaha Bulshada ee Isku xidhka Degmada Tucson / Pima si looga hortago loona joojiyo guri la'aanta dhalinyarada.
Bixinta codka dhalinyarada ee go'aan gaarista gudaha CoC.
Soosaarista iyo kormeerida hirgelinta istiraatiijiyadaha loogu talagalay in loogu adeego dhalinyarada la soo deristay hoy la’aan wax ku ool ah inta lagu gudajiro CoC oo dhan.
Ka caawi horumarinta iyo qaabeynta codsiyada maalgelinta mashaariicda hoy la'aanta dhalinyarada.
Isku-darka fikradaha dhalinyarada ee dhammaan CoC iyo isku-duwidda howlaha diiradda dhalinyarada lala yeelanayo guddiyada kale, kooxaha shaqada, HMIS Lead, iyo Codsadaha Lead / Iskaashiga ee CoC.
Sebastian Mendivil, Dhaqdhaqaaqa Bulshada
Victoria Tullercash, Dhalinyarada Iyaga Keliya
Stephanie Santiago, Dhaqdhaqaaqa Bulshada
Keona Rose, Dhaqdhaqaaqa Bulshada
Xaalad, Khibrad nololeed